Kusezandleni zeSharks ukuthi siyaphi isicoco seRainbow Cup - Impempe
Kusezandleni zeSharks ukuthi siyaphi isicoco seRainbow Cup
Umdlalo wokugcina phakathi kweCell C Sharks neVodacom Bulls yiwona ozocacisa ukuthi ishona ngakuphi iRainbow Cup SA ka-2021.
ISharks izibeke ethubeni lokuyiwina le ndebe ngesikhathi ibhuquzisa i-Emirates Lions ngo 33-21 e-Ellis Park Stadium, ngoMgqibelo. Amaphuzu amahlanu atholwe yiSharks kulo mdlalo enze ukuthi isale ngamane kuphela kwiBulls okuyiyona ezihola phambili.
IBulls izovakashela eKings Park Stadium, eThekwini, ngempelasonto ezayo, kanti okwayo ukuthi ithole iphuzu lebhonasi kuphela ukuze iqede iqhwakele. Lokhu kuchaza ukuthi ezikaSean Everitt (iSharks) kumele ziwine ziphinde zithole iphuzu lebhonasi ukuze ziqede phezulu.
Akukho ukungabaza ukuthi lo mdlalo wokugcina uzoshuba ngoba iSharks kumele ilwele ukuthi iBulls ayiwatholi ama-try amane, futhi uma beyishaya kumele baqhele impela kungabi ngaphansi kwamaphuzu ayisikhombisa.
Phela uma iqembu lishaywe ngamaphuzu ayisikhombisa kuya phansi, lithola ibhonasi okuyinto okumele iyigweme iSharks uma isibhekene neBulls.
Umdlalo wangempelasonto phakathi kweSharks neLions ubudle ngamaphutha amaningi, futhi yiqembu lasekhaya elizenzele phansi ngokungenzi izinto ngendlela efanele.
Nokho iSharks ibingabukeki ukuthi izoshaywa njengoba ziye ekhefini ihamba phambili ngo 19-14. Kodwa esiwombeni sokuqala womabili amaqembu ayeke inqwaba yamathuba.
Akwaziwa ukuthi umqeqeshi weSharks uzokwenza luphi ushintsho emdlalweni wokugcina njengoba iqembu elidlale ngempelasonto lenze kangcono yize ebekhona amaphutha.
Kulo mdlalo baningi abadlali abebephunyuziwe okubalwa kubo ukaputeni uLukhanyo Am, Siyamthanda Kolisi, Thomas du Toit, Aphelele Fassi, nabanye.
Emdlalweni wokuqala weRainbow Cup iBulls ibukise ngeSharks iyishaya ngo 43-9 ePitoli. Ngempelasonto ezayo leli qembu laseThekwini kumele liwine ngendlela ecishe ifane ukuze ligudluze iBulls esicongweni, lihambe nendebe.
Abashaye amaphuzu kwiSharks ngempelasonto:
Ama-try: Kerron van Vuuren (amabili), Phendulani Buthelezi, Makazole Mapimpi, Boeta Chamberlain
Ama-conversion: Mannie Libbok (amathathu), Chamberlain
Abashaye amaphuzu kwiLions:
Ama-try: Andre Warner, Len Massyn, PJ Botha
Ama-conversion: Jordan Hendriks (amathathu)
Previous Previous post: Usenalo ithemba lokuhlenga iChippa uSeema
Next Next post: Uthi kwesuleke izinyembezi ngendondo yeligi uMokwena weSundowns